ဦး ဆို တဲ့ ခေါ်သံ ကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း ဆို တဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့ အဖြစ် – Let Pan Daily
ဦး ဆို တဲ့ ခေါ်သံ ကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း ဆို တဲ့ ဦးလေးကြီး ရဲ့ အဖြစ်
Let Pan | January 16, 2021 | Knowledge | No Comments
ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ် မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။
“ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့ တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေ မိတယ် ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ”
“ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီ တောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက် ကုန်တယ်။ လခွမ်းမှပဲ။
“ဟဲ့ နေပါဦး ခလိန်း ဘာပြော” “ခလိန်းမှာ ဦး နဲ့ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ခစ်ခစ်” “ဟယ် ဘယ့်နှာလုပ် ကိုယ်ဝန် ရှိနေသတုန်း နင်နဲ့ငါ အပြင်မှာလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပဲနဲ့”
“ဦးနော် ဘာလဲ ခေါင်းရှောင်ချင်တာလား တရားစွဲလိုက်ရမလား ပြော” တစ်ဖက်က လေသံမာလာတော့ ကျုပ် ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။
“ငှယ် ဘလိုတောင်လား” “အဲ့ဒါ မနက်ကြတော့ ပျို့ချင်သလို ဖြစ်နေလို့ ဆေးခန်း သွားပြတာ ဆရာဝန်က ပြောတယ်” “အင်း ဘာပြောသတုန်း” “ခလိန်းမှာ ကိုယ်ဝန် သုံးလ ရှိနေပြီတဲ့” “ဗုဒေါ္ဓ” “အဲ့ဒါ ဦးနဲ့ရတာ မဟုတ်ရင် ဘယ်သူနဲ့ ရမတုန်း” ကျုပ် မျက်ရည်ပါ ဝိုင်းလာတယ်။ သောက်ကျိုးနည်း ဖြစ်ပုံများ ။
ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရည်းစားထားတဲ့ တဏှာတစ်ကြောခုတော့ အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုက် ရတယ်။ ဖုန်းနံပတ်ကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်ရတယ် ။ ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း။ နင့်မေကလွှားမှပဲ။
(ဤစာကို မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် ရေးသည်။)
ကိုကောင်း Credit ခွက်ဒစ် အိုးဒစ် ဇလုံဒစ် ပုဂံဒစ် ဇွန်းဒစ်
ဦးဆိုရင္ ေၾကာက္ေနရသည္ …. ဖုန္းဝင္လာလို႔ ေကာက္ကိုင္ လိုက္တာ ေဖ့ဘုတ္ ေပၚ မွာ မေန႔ကမွ ခ်စ္သူျဖစ္သြားတဲ့ ေခးေလးရဲ႕ ဖုန္းျဖစ္ေနေတာ့ က်ဳပ္ ေပ်ာ္ သြားတယ္။
“ဦး” “ေျပာ ခလိန္း” “ဦး ေပ်ာ္လို႔ရၿပီ သိလား” ခ်ိန္းေတြ႕ ေတာ့မယ္ ထင္တယ္လို႔ ေတြးမိၿပီး က်ဳပ္ ပီတိေတြ ဖ်ာေန မိတယ္ ။ “အြန္း ဘာလို႔လဲ” “ခလိန္းမွာ ဦးနဲ႔ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနၿပီေလ”
“ဖူးးးးးး ” ေသာက္ေနတဲ့ ေကာ္ဖီ ေတာင္ ပါးစပ္က ျပန္ထြက္ ကုန္တယ္။ လခြမ္းမွပဲ။
“ဟဲ့ ေနပါဦး ခလိန္း ဘာေျပာ” “ခလိန္းမွာ ဦး နဲ႔ ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ရွိေနၿပီလို႔ ခစ္ခစ္” “ဟယ္ ဘယ့္ႏွာလုပ္ ကိုယ္ဝန္ ရွိေနသတုန္း နင္နဲ႔ငါ အျပင္မွာလည္း တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူးပဲနဲ႔”
“ဦးေနာ္ ဘာလဲ ေခါင္းေရွာင္ခ်င္တာလား တရားစြဲလိုက္ရမလား ေျပာ” တစ္ဖက္က ေလသံမာလာေတာ့ က်ဳပ္ ဘာေျပာရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။
“ငွယ္ ဘလိုေတာင္လား” “အဲ့ဒါ မနက္ၾကေတာ့ ပ်ိဳ႕ခ်င္သလို ျဖစ္ေနလို႔ ေဆးခန္း သြားျပတာ ဆရာဝန္က ေျပာတယ္” “အင္း ဘာေျပာသတုန္း” “ခလိန္းမွာ ကိုယ္ဝန္ သုံးလ ရွိေနၿပီတဲ့” “ဗုေဒါၶ” “အဲ့ဒါ ဦးနဲ႔ရတာ မဟုတ္ရင္ ဘယ္သူနဲ႔ ရမတုန္း” က်ဳပ္ မ်က္ရည္ပါ ဝိုင္းလာတယ္။ ေသာက္က်ိဳးနည္း ျဖစ္ပုံမ်ား ။
ေဖ့ဘုတ္ေပၚ ရည္းစားထားတဲ့ တဏွာတစ္ေၾကာခုေတာ့ အဲ့ ကေလးမကို ဘေလာ့လိုက္ ရတယ္။ ဖုန္းနံပတ္ကို ဘလက္လစ္ထဲ ထည့္ရတယ္ ။ ဦး ဆိုတဲ့ ေခၚသံၾကားရင္ အခုထိ ၾကက္သီး တျဖန္းျဖန္း ထတုန္း။ နင့္ေမကလႊားမွပဲ။
(ဤစာကို မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ေရးသည္။)
ကိုေကာင္း Credit ခြက္ဒစ္ အိုးဒစ္ ဇလုံဒစ္ ပုဂံဒစ္ ဇြန္းဒစ္
“မိန္းမ” (ဇနီး) နဲ႔ “ကီပင္” (စေမာ) ကြာျခား ခ်က္
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ (သို့) အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့ (သို့) ပဝါရဏာနေ့
ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ေဖာက္ျပန္တာ တဏွာႀကီးၿပီး ဉာဏ္ရည္ နိမ့္လို ႔ပါ…
(30.7.2020 မွ 5.8.2020) အထိ ( ၇ )ရက္ သားသမီး တစ္ပါတ္စာ ေဟာ စာတမ္းမ်ား.
အိုကွယ် ကလေး ရယ် စူးရှ တဲ့ အသံကြောင့် စျာပန ခမ်းမထဲ ရှိ …
ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်တာတွေ ကို နိုင်သလောက် လုပ်ကြရအောင်ဗျာ ဆိုတ​ဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြပေး လာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီး
“မြန်မာ့ အရေး တရုတ်က ဘက်မလိုက် ဘဲ အားလုံး နဲ့ ထိ တွေ့သွားမယ်လို့ ဆို”
နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာ နောက်မျိုးဆက်တွေ အတွက် ဇွဲမလျော့ပဲ နေ့စဉ် အားသွန် ခွန်စိုက် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် နေတဲ့ ပိုပို
ဪ.. ပြည်သူတွေရယ် အိမ်မှာထမင်းဝင်မစားလို့ စိတ်ဆိုးတာတဲ့လား မျက်ရည်ပါ ဝဲတယ်
သမီးလေး မကြယ်စင် အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူရင်နာနာ နဲ့ ရေးတဲ့ စာ